गफ ! .....: गजल : लाखमा
Posted by दीपक जडित at 9:28 PM
साह्रै राम्रो गजल! साह्रै राम्टिके गजल! (यि 'राम्टिके' भनेको 'रोमान्टिक'नै फेरि। साझाको चौतारीमा जन्मेको शब्द हो।)
गजलमाथि टिका-टिप्पणी गर्न त म आफूलाई योग्य सम्झिन्न, तर यो तलको शेर भने अलि अमिल्दो लाग्यो यो गजलमा;
अरु सबै शेर एकातिर यो एकातिर भएजस्तो लाग्यो। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छु। माफ पाउँ।
अनि 'बिन्दुली' भनेर 'बिन्दु' वा 'टिका' भन्न खोज्नुभएको हो?
हजुर बिन्दुली भनेर टिकालाई नै लेखेको हुँ , कतै टिकुली भनेझैं हो यो । म आफैंलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएकै हो उक्त शेरमा जहाँ तपाईंले अरु शेर एकातिर र यो शेर एकातिर भएको कुरा औंल्याउनु भएको छ । मैले त्याँहानेर केहि परिमार्जन गर्ने अठोट गरिसकेको छु । गर्छु - फेरी आएर हेर्दैगर्नुहोला । त्यसको निंती धन्यवाद !
नेपाली गजलको बारेमा जानकार नभएकोले र नेपाली गजलको मानक बारे पनि बिस्तृत ज्ञान नभएकोले यो गजलको प्राबिधिक पक्षको बारेमा मैले बोल्नु ठीक हुँदैन। तर पढदा रोचक र रमाईलो छ। 'त्वरित' काफियाको प्रयोग गर्नु भएको हो की?
त्यसो त म स्वयं पनि ढुक्क छैन बनावटको हिसाबले यो गजल भन्न लायक छ या छैन , मैले भनिदिएं त्यति हो । यो गजल नहुन पनि सक्छ यस्लाई मैले यौटा लयमा लेखेको छु । साह्रै सुन्दर सुनिन्छ यस्लाई गाउंदा । कास म यो ब्लगमा सुनाउन पनि सक्थें ।
दिलीपजीलाई पनि धन्यवाद !